जन्मदिन मनाउन माल्दिभ्स पुगेकी प्रीयंका कार्कीको बस्त्रले ठाउँ छोड्यो (तस्वीर सहित) - www.dthreeonline.com
जन्मदिन मनाउन माल्दिभ्स पुगेकी प्रीयंका कार्कीको बस्त्रले ठाउँ छोड्यो (तस्वीर सहित)
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण १६, २०७७ समय: १४:०८:३७
ईटहरी/ सेलिब्रेटिहरुको चर्चा परिचर्चा फिल्म हलमा नलागे पनि निरन्तर भैरहेको छ । एकपछि अर्को चर्चा र आलोचनाले नेपाली सेलिब्रेटिलाई आफ्ना फ्यानहरु माझ अप्डेट गराईरहेका छन् । पछिल्लो समय पल शाह र अरुण कुमार प्रधानको ल फ डा ले छोटो समयमै निचोड पायो । अब, प्रीयंका कार्की भने फेरि आलोचनाको सिकार हुदैछिन । सनिवारबाट ३३ वर्ष लागेकी कार्किले आफ्नो ज वा नि लाई छर्लङ्ग पारेकी छन् ।
ईन्स्टाग्राम स्टोरिमा उनले एक तस्वीर राखेकी छ्न, जुन कार्की नै हुन् । सो तस्विरमा उनी पौडी खेल्दैछिन । तर, नि र्व स्त्र । तस्वीरलाई नियालेर हेर्दा स्विमिङमा लगाईने स्विमिङ कस्टुम त छैन नै, उनको सरिरमा कुनै ब स्त्र पनि नभएको प्रष्टै छ । गो प्य अ ङ्ग लाई पानको पात ईमोजीले छोपेकी छन् ।
जन्मदिन मनाउन आफ्नो पति आयुष्मान देशराज जोशिसंग रक्सीको स्पोन्सरमा माल्दिभ्स पुगेका उनी मस्त र बिन्दास छिन् । तर, एउटा सेलिब्रेटिले यसरी जोसमा होस गुमाउदा अरुले के सिक्ने ? सो तस्वीरलाई उनकै पति जोशीले कैद गरेका हुन् । सो तस्विरमा आयुष्मानको खुट्टाको पनि केही भाग देखिएको छ । ईन्स्टा स्टोरिमा तस्विरसंगै प्रीयंकाले आयुष्मानलाई मेन्सन समेत गरेकी छन् ।
यस्तै उनको अर्को तस्विरमा पनि ब स्त्र ले धोका दिएको छ । जन्मदिन मनाउन बसेको होटलको ईन्स्टाग्राममा सार्बजनिक प्रीयंकाको तस्विरमा उनको स्त न लाई ब स्त्र ले धोका दिएको छ । केही खादै म स्त देखिएकी उनको ब स्त्र ले उनैलाई कुरिकुरी भनिरहेको छ । प्रीयंकाको बि कि नी अवतारले त यसअघि पनि सामाजिक संजाल र मिडिया तातेकै हो । तर, प्रस्तुत तस्विरहरुले भने उनको समाजमा अब प्रतिष्ठा र इज्जत कति ? भन्ने प्रश्न खडा गर्दिएको छ ।